Waa maxay RCS maxayse na siisaa | War gadget
Kahor imaatinka codsiyada farriimaha ee internetka, SMS ayaa ahaa wadada kaliya ee fariimaha qoraalka ah loogu diro nambarada taleefannada kale, farriimaha qoraalka oo kharash ku baxay iyo in aysan si sax ah u jabanayn. In yar ka dib, MMS ayaa timid, fariimo qoraal ah oo aan ku wehelin karno sawirro qiimahoodu xadgudub ahaa.
Imaatinka WhatsApp, hawl wadeenadu waxay arkeen qayb muhiim ah oo ka mid ah dakhligooda oo burburaya. Markii sanadihii la soo dhaafay, iyo taleefannada casriga ahi ay beddelayeen taleefannada, adeegsiga SMS-ka waxaa loo rogay ficil ahaan eber. Beddelka kaliya ee ay hawlwadeennadu heleen ayaa ahaa inay bilaabaan barxad fariin ah oo hawlgalkeedu la mid yahay WhatsApp.
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in codsigan aan laga warqabin suuqa isla markaana si dhakhso leh loo joojiyay hawlwadeennada. Markii sanadihii la soo dhaafay, codsiyo badan oo fariin ah sida Telegram, Line, Viber, WeChat, Signal, Messenger, Skype ayaa yimid ... Hawl wadeennadii ayaa ku tuuray tuwaalka wax dan ahna kamay haynin inay bixiyaan beddelaad la xidhiidha dalab.
1 Asalka RCS
2 Sidee RCS u shaqeysaa
3 Taasi waxay bixisaa
4 Sida loo kiciyo ama loo joojiyo fariinta RCS
Ma ahayn illaa 2016 (WhatsApp waxaa la bilaabay 2009 ee iOS iyo 2010 loogu talagalay Android, inkasta oo aysan caan noqon ilaa 2012) markii, MWC hoostiisa, shirkadaha taleefannada ugu waaweyn ay ku dhawaaqeen heshiis ay la galeen Google iyo dhowr shirkado taleefannada casriga ah si loo hirgeliyo. heerka. RI Cwada hadal Service (RCS) iyo in loogu yeeray noqo bedelka SMS (Adeeg Fariin Gaaban).
Ahaanshaha beddelka dabiiciga ah ee SMS, borotokoolkan cusub wuxuu lahaa hadafka shaqada iyada oo loo marayo app qoraalka hooyoSidaa darteed, lagama maarmaan ma aha in la rakibo codsi dhinac saddexaad ah, sidaa darteed, farriimaha waxaa loo diri karaa lambar taleefan kasta iyada oo qofka loo soo dirayaa uusan u baahnayn codsi gaar ah, sida WhatsApp, Telegram, Viber ...
Ahaanshaha adeeg isgaarsiineed oo hodan ah (tarjumaad bilaash ah adeegga isgaarsiinta) marka lagu daro dirista qoraalka, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa dir faylasha nooc kasta ha ahaadee, ha ahaato sawirro, fiidiyowyo, cajalado ama nooc kasta oo feyl ah. Maaddaama aysan u baahnayn codsi gaar ah, dhammaan boosteejooyinka waa inay la jaan qaadaan adeeggan, markaa waxay lagama maarmaan u ahayd hawlwadeennada iyo soo saarayaasha terminaalka inay ku heshiiyaan ka qayb qaadashada mashruucan cusub maadaama ay tahay inay taageero u fidiyaan RCS ee dalkaaga hooyo codsiyada fariimaha lagu maareeyo fariimahaaga qoraalka ah.
Microsoft iyo Google Waxay sidoo kale qayb ka ahaayeen heshiiska lagama maarmaanka u ah inay awoodaan inay soo bandhigaan tikniyoolajiyaddan cusub, waa tan dambe sababo muuqda awgood maaddaama dhammaan taleefannada casriga ah ee suuqa la soo gala Android ay ku hoos jiraan dalladooda. Google sidoo kale waxay mas'uul ka noqon doontaa inay soo saarto codsi fariin ah dhammaan nidaamka deegaanka ee Android kaasoo ka faa'iideysan kara borotokoolkan cusub haddii shirkadda soo saareysa aysan sidan oo kale u samayn. Apple waligeed ma taageerin adeegan cusub waqtigan la joogo waxay umuuqataa inaysan wali ku talo jirin inay maanta sameyso.
Sidee RCS u shaqeysaa
Taageerada RCS ee soo saarayaashu waxay bilaabmeen wax yar uun ka dib markii heshiiska ay ku dhawaaqeen daneeyayaasha waaweyn. Hawl wadeenadu sidoo kale waxay bilaabeen inay qaataan borotokoolkan cusub, laakiin midkoodna ma raacin waddo horay loo calaamadeeyay iyo wax yar ka dib markay ogaadeen in shaqooyinka qaarkood ay la jaan qaadayaan qaar ka mid ah hawl wadeyaasha iyo shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah, laakiin aan la jaan qaadi karin hawlwadeennada kale.
Nasiib wanaagse, wax waliba way isbadaleen markii Google dibiga ka qaaday geesaha oo uu balanqaaday inuu bilaabayo codsi loogu talagalay Android, codsi ah in isticmaale kasta uu ku rakibi karo qalabkooda, iyadoon loo eegin soo saaraha, si looga faa’iideysto farriimaha qoraalka ee hodanka ah. Codsigan, deji xeerar taxane ah in shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah iyo kuwa ka shaqeeya labadaba ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan iyo in isticmaaleha uusan la kulmin dhibaatooyin iswaafaqla'aan.
Bishii Maarso 2020, Google waxay cusbooneysiisay codsiyada Farriimaha laga heli karo Play Store, si loo siiyo taageerada RCS. Si looga faa'iideysto borotokoolkan cusub, waxaa lagama maarmaan noqotay in baaraha baadi goobka uu horey heshiis ula gaaro shirkadaha ugu waaweyn, heshiiskaas oo horeyba loo sharciyeeyay ugu yaraan saddexda ugu waaweyn Spain sida Movistar, Orange iyo Vodafone.
Si aad u awood u yeelatid adeegsiga borotokoolkan, waxaa lagama maarmaan ah in labada terminaalba, kuwa diraha ah iyo kuwa wax qaata, waa la jaan qaadayaan borotokoolkan, maadaama haddii kale ruuxa qaata uu heli doono fariin qoraal ah oo caadi ah oo aan lahayn nooc kasta oo ka mid ah maaddooyinka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'multimedia', fariin kharash ku yeelan doonta soo diraha, sida ku cad heshiiska ay la aasaaseen hawlwadeenkeeda. Borotokoolka RCS waa mid gebi ahaanba xor ah kana duwan SMS dhaqameed.
Labada arji ee Google Messages iyo midka ay soo saaraan soosaarayaasha kaladuwan ayaa si otomaatig ah u ogaanaya midka xiriiriyeyaashayada horeyba u haysteen taageerada RCS. Sideen ku ogaan karnaa? Aad u fudud. Markaad dirto farriinta, waa inaan gujinnaa furaha dirista, oo ku yaal dhinaca midig ee sanduuqa qoraalka. Haddii cinwaan uusan ka muuqan hoosta fallaartaas, qofka qaata farriinteennu wuxuu heli doonaa farriinta warbaahineed oo dhammaystiran.
Haddii qaataha farriinta uusan shaqeynin shaqadan, ama ha u sii wado hawl wadeenkooda ama soo saaraha taleefannadooda casriga ah, SMS ayaa soo muuqan doona haddii aan qoraal u dirayno oo keliya.
ama MMS haddii aan dirayno nooc kasta oo feyl fayl ah ah.
Taasi waxay bixisaa
Nidaamkan cusub waxaan ku diri karnaa nooc kasta oo feyl ah, ha ahaato sawirro, fiidiyowyo, feylal maqal ah, GIFs, istiikarada, emoticons, abuuro kooxo, wadaagaan goobta, wadaagaan xiriirada ajandaha ... intaas oo dhan iyadoo xadka ugu badan uu yahay 10 MB. Marka laga hadlayo wicitaanada fiidiyowga, suurtagalnimadaas sidoo kale waa la tixgeliyey, laakiin xilligan lama heli karo.
Sida aan arki karno, borotokoolkani wuxuu na siiyaa isla faa iidooyinka sida codsi kasta oo fariin deg deg ah ah. Ka sokow, sidoo kale kombiyuutarro iyo kiniinno ayaa la heli karaa, sidaa darteed waxaan awoodi doonaa inaan wadahadal la yeelano asxaabteena iyo qoyskeena sidii inaan toos uga sameyno taleefankeena casriga ah.
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo fariinta RCS
Isla marka aad rakibto nooca Android ee laga heli karo Play Store, maamuuska RCS ayaa diyaar noqon doona si aan u adeegsan karno, maaddaama ay u shaqeyneyso si hooyo ahaan ah. Haddii aan dooneyno inaan ka fureyno, waa inaan sameynaa tallaabooyinka soo socda:
Waan helnaa arjiga Farriimaha.
Dhagsii saddexda dhibic oo kuyaala si toosan geeska kore ee midig ee arjiga oo guji goobaha.
Gudaha goobaha, waxaan helnaa liiska Hawlaha wada sheekaysiga.
Liiskan dhexdiisa, haddii hawlwadeenkeennu uu taageero RCS, ereyga Xaaladda ayaa la soo bandhigi doonaa Ku xidhan. Haddii kale, waxay ka dhigan tahay hawlwadeenka taleefanka weli wax taageero ah kuma fidin ama waa inaad wacdaa si aad u hawlgeliso.
Si loo joojiyo, kaliya waa inaan daminaa badhanka magaca Daar sifooyinka wada sheekaysiga
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Waa maxay RCS maxayse na siisaa
Hagaag, wali waxaan isticmaalaa SMS. Waxay ku jiraan "aan xadidnayn" badiyaa dalabyada midowga shirkadaha waaweyn (Orange + € 1 bishii). Uma arko faa iidooyinka Wsapp iyo haddii cilladaha ay leeyihiin
Tilmaamaha Guryaha ee Ku Xiran: Qalabka Ugu Fiican